Xasan Shiikh oo u dhoofay Mareykanka
13 Jan 13, 2013 - 11:02:14 AM
Madaxweynaha Somalia Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid tahay Wasiirada Arimaha DF, Fowsiyo Yuusuf ayaa maanta u dhoofay dalka Mareykanka, iyadoo aan la ogeyn inta ay qaadn doonto booqashadooda.
Safarka Xasan Shiikh ayaa lagu sheegay inuu yahay sidii uu ugala hadli lahaa Madaxda Mareyakanka inay gacan ka geystaan horumarinta dhinacyada Amaanka iyo dib u dhiska Somalia.
“Booqashadan waa mid lagu adkeynayo xiriirka Mareykanka iyo DF iyadoo Madaxweynuhu uu la kulmi doono Madaxda Washington wuxuuna kala hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dhinac iyo horumarinta Somalia” ayaa lagu yiri war looga hadlayay Safarka Madaxweynaha uu ku aaday Mareykanka.
Madaxweynaha Somalia oo xilka haya 120 casho ayaa wuxuu in ka badan Toban jeer u dhoofay dalal u badan kuwa dariska la ah Somalia, waxaana la sheegay in Madaxweynuhu uu safari badan ku tegi doono dalal badan si uu uga hadlo horumarka Somalia.
Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu sheegay in Madaxweynaha Somalia oo doonaya inaan dib loogu laaban halkii ay Somalia ka timid uu go’aan ku gaaray inuu intii awoodiisa ah xoojiyo xiriirka Somalia iyo Dunida.
Dowlada Somalia ayaa waxay tan iyo markii la dhisay ku jiray howlo ay ku sheegtay inay kusoo celinayso nabadii iyo kala dambeyntii Somalia horay uga jirtay, inkastoo weli ay Muqdisho ka dhacayaan qaraxyo iyo dilal loo geysanayo xubnaha dowlada ka tirsan.
Madaxweyne Xasan ayaa booqashooyin kusoo maray dalal ay ka mid yihiin: Sudan, Ethiopia, Jabuuti, Kenya, Uganda iyo Turkiga, kuwaasoo uu lasoo saxiixday heshiisyo looga taageerayo Dowlada Somalia horumarinta amniga iyo dib u dhiska.